ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်။ – Second Letter from John the Apostle – JESUS UNLTD
ရှင်ယောဟန်သြဝါဒစာ ဒုတိယစောင်။ – Second Letter from John the Apostle
၁ ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ချစ်ညီမလေး၊ မင်းကို ငါ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အသက်ကြီးပြီး လေးစားခံရတဲ့ အစ်ကိုကြီးဖြစ်တဲ့ ငါယောဟန်က မင်းဆီကို စာရေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ တကယ်ချစ်ရတဲ့ မင်းရဲ့ကလေးတွေကိုလည်း စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ငါတို့အားလုံးက မင်းရဲ့ကလေးတွေကို မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သူတို့ကို ပြောပြပေးပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ငါတို့တွေ သိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂ ဒီအမှန်တရားက ငါတို့အထဲမှာ ရှိပြီးတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ငါတို့နဲ့အတူ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃ အဖဘုရားရှင်နဲ့ သားတော်သခင်ယေရှုဆီကလာတဲ့ ကျေးဇူးတော်၊ ကရုဏာတော်နဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကို လက်ခံရရှိကြပါစေ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အမှန်တရားအတိုင်း ငါတို့တွေ ပြုမူကြရအောင်။
၄ အမှန်တရားက ငါတို့ကို သွန်သင်ပေးတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်း အသက်ရှင်ဖို့ အဖဘုရားဆီကနေ ပညတ်ချက်တစ်ခုကို ငါတို့တွေ လက်ခံရရှိခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ညီမလေးရဲ့သားသမီးတွေက ဒီပညတ်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နာကြလို့ အစ်ကို အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
၅ သခင်ယေရှုအားဖြင့် ချစ်ရတဲ့ ငါ့ညီမ၊ ငါတို့တွေ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြရမယ်ဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်ကို အခု သတိပေးချင်ပါတယ်။ ငါက မင်းဆီကို ကိစ္စအသစ်အကြောင်း ရေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစကတည်းက ဘုရားသခင်က ဒီပညတ်ချက်ကို ငါတို့ဆီ ပေးထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
၆ ငါတို့တွေ လူတွေအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားတဲ့အခါ ငါတို့က ဘုရားရဲ့ပညတ်ချက်တွေကို နားထောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြဖို့ ဘုရားသခင်က ငါတို့ကို ပြောခဲ့တာ သတိရပါ။
၇ လောကကြီးထဲမှာ လူလိမ်တွေ များနေတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်က လူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ကြွလာခဲ့တယ်ဆိုတာ သူတို့တွေ မယုံကြည်ကြဘူး။ ဒီလိုလူတွေက တခြားသူတွေကို လှည့်ဖျားကြတယ်။ သူတို့တွေက ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ အန္တိခရစ်တွေဖြစ်ကြတယ်။
၈ ကိုယ် နားထောင်နေတဲ့သူတွေကို သေချာဂရုစိုက်ပါ။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင် ငါတို့ လုပ်ခဲ့သမျှအရာတွေကို ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့ ဆုလာဘ်အပြည့်အဝရကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
၉ ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကို ချိုးဖောက်တဲ့သူနဲ့ ခရစ်တော် သွန်သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း မလုပ်ဆောင်တဲ့သူက ဘုရားသခင်နဲ့ မဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ခရစ်တော်သွန်သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အသက်ရှင်တဲ့သူက အဖဘုရားရှင်နဲ့ သားတော်ကို သက်ဆိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က မင်းဆီ လာပြီးတော့ ခရစ်တော် သွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့မတူခြားနားတာတွေ စဟောပြောတော့မယ်ဆိုရင် သူ့ကို မင်းတို့အိမ်ထဲကို မခေါ်ပါနဲ့။ ပြီးတော့ သူနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာ မလုပ်ပါနဲ့။
၁၁ ဒီလိုမျိုးလူနဲ့ အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။ ဒါမှ သူ့ရဲ့ဆိုးယုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ မင်း မပါဝင်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၂ ငါ မင်းနဲ့ တခြားကိစ္စတွေအများကြီး ဆွေးနွေးဖို့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအကြောင်းကို စာရွက်ပေါ်မှာ မှင်နဲ့ မရေးချင်ဘူး။ မင်းဆီကို ငါလာပြီးတော့ ဒီအကြောင်းကို အချင်းချင်း ပြောကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီဆုံတွေ့ခြင်းက ငါတို့ကို သိပ်ဝမ်းသာစေလိမ့်မယ်။
၁၃ သခင်ဘုရားက မင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သလိုပဲ မင်းရဲ့ညီမကိုလည်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ မင်းညီမရဲ့သားသမီးတွေက မင်းကို နှုတ်ဆက်စကား ပါးကြပါတယ်။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 I am greeting you, my dear sister in the Lord, whom God has chosen. I am John, an old and respected man, who is writing to you. I am also writing to your children whom I truly love. Tell them that we all love them because we know the truth about who God is.
2 This truth lives inside of us, and it will be with us throughout all the ages.
3 Receive grace, mercy and peace which come from God the Father and from His Son the Lord Jesus Christ. Let’s act according to the truth and love.
4 We receivedacommandment from the Father to live the way the truth teaches us. And I am very glad that your children keep this commandment.
5 My dear sister in the Lord, now I would like to remind you of one more commandment that we must love one another. I am not writing to you about something new. But this is the commandment which God gave us from the very beginning.
6 When we love others, we obey God’s commandments. Remember that from the beginning God told us to love one another.
7 There are many liars in the world. They do not believe that Jesus Christ came to the earth inahuman body. Such people deceive others. They are antichrists who are hostile to Christ.
8 That is why you should pay attention to who you listen to. Otherwise, we would lose what we worked on and would not receive full reward.
9 A person who breaks the teachings of Christ and does not act the way Jesus teaches does not belong to God. Andaperson who lives as Christ teaches belongs to the Father and the Son.
10 Suppose, some person will come to you and start preaching differently from what Christ taught. In this case, do not invite him into your house and do not communicate with him.
11 Do not spend time with suchaperson so that you would not participate in his evil deeds.
12 I also haveadesire to discuss many other things with you. But I don't want to do it with paper and ink. I hope to come to you and talk about it personally. And this meeting will bring usalot of joy.
13 The Lord has chosen your sister as well as you. And her children are sending greetings to you. Amen.